Maxaa looga hadlayaa shirka maamul goboleedyada ee Baydhaba?
Monday May 14, 2018 - 19:03:48 in Wararka by Abdikarim Saed Salah
Baydhabo (Horseednews.com) Waxaa maanta magaalada Baydhaba ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka furmay shirka golaha iskaashiga ee dowlad goboleedyad Soomaaliya, kuwaasi oo halkaasi gaaray shalay, sheegayna inay ka arrinsanayaan arrimaha k
Baydhabo (Horseednews.com) Waxaa maanta magaalada Baydhaba ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka furmay shirka golaha iskaashiga ee dowlad goboleedyad Soomaaliya, kuwaasi oo halkaasi gaaray shalay, sheegayna inay ka arrinsanayaan arrimaha khuseeya maamuladooda.
Shirkan oo uu marti geliyay madaxweynaha Koonfur Galbeed, Shariif Xassan Sheekh Aadan ayaa madaxda dowlad goboleedyada waxaa ay sheegeen in shirkan looga arrinsasanayo arrimo ay kamid yihiin amniga iyo sidii ururka Alshabaab looga xoreyn lahaa deegaanada ay heystaan.
Arrimaha amniga oo ay ka qeybgalayaasha maanka ku hayaan ayaa waxaa jiray shir dhawaan lagu qabtay Belgium-ka, halkaas oo uu ka qeybgalay Ra'isulwasaare Xassan Cali Kheyre, balse madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo dhawaan hadlay ayaa sheegay in dowlad goboleedyada aanan shirkaas lagu martiqaadin.
Madaxda ayaa waxaa kale oo ay intaa ku dareen in sidoo kale ay ka arrinsanayaan qeybsiga kheyraadka dalka iyo in ula-jeedada ugu weyn ee laga leeyahay shirkan ay tahay sidii wax iyaga ay isku waafaqsanyihiin ay ula hortagi lahaayeen dowladda federaalka, sida uu kusoo waramayo wariyaha BBC-da.
Furitaanka shirka ayaa madaxda waxaa kale oo ay xuseen in doorashooyinka la filayo in Soomaaliya ay ka dhacaan sannadka 2021-ka ay qeyb ka yihiin ajendaha shirka.
Ma jirin cid ka socotay dowladda federaalka oo ka qeyb gashay shirka Baydhabo, waxaana shirkan uu imaanaya iyadoo bishii Maarso loo ballansanaa shir ay ka wada qeyb geli lahayeen madaxda maamulada iyo dowladda federaalka, kaasi oo la filayay inuu ka dhaco isla magaalada Baydhaba, lana doonayay in looga hadlo ammaanka dalka. Lama oga sababta uu shirkaas u baaqday.
Xiriirka qaar kamid ah maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ayaa muddooyinkii dambe ahaa mid aan wanaagsaneyn, kadib markii ay isku khilaafeen go'aanka dowladda dhexe ay ka qaadatay khilaafka qaar kamid ah dalalka carabta.
Madaxweynaha maamulka Jubaland, Axmed Islaam, Axmed Madoobe oo dhawaan booqasho ku tegay dalka Imaraatka ayaa markii uu dib ogu laabtay magaalada Kismayo waxaaa uu sheegay in dowladda federaalka ay dhinac uga weecatay go'aankii dhexdhexaadnimada ee ay ka qaadatay khilaafka ka jira dalalka khaliijka.
Sidoo kale madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Gaas oo ah guddoomiyaha golaha iskaashiga ee dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa dhawaan mar uu booqasho ku tegay dalka Imaraatka waxaa uu madaxda Imaraatka ka codsaday inay sii wadaan taagerada ay u fidinayaan dowladda Soomaaliya.
Hadlka madaxweyne Gaas ayaa yimid, iyadoo xiligaasi dowladda Isutagga Imaaraatka Carabta ay sheegtay inay joojinayso iskaashiga milateri ee ay la leedahay Soomaaliya.